Benzema vs Morata: Yaa U Wanaagsan Real Madrid?
HomeWararka MaantaBenzema vs Morata: Yaa U Wanaagsan Real Madrid?
30/10/2016 Abdiwahab Ahmed
Taageereyaasha kooxda Real Madrid ayaa kala dooranaya midka ay jecel yihiin in uu ciyaar walba ka mid ahaado xiddigaha garoonka soo gelaya, kaas oo tababare Zidane ay waajib tahay in uu ciyaarsiiyo si guul uu u gaadho.
Benzema iyo Morata waa laba weeraryahan oo dunida sumcad fiican ku leh, waliba xiddiga reer France kuma koobna dhalinta goolasha, laakiin sida uu ciyaarta u jiheeyo marka goolka kooxda ka soo horjeedda la ag joogo, ayaa ah mid aanay cidina ku gaadhi karin. Balse, orodka, daal la’aanta iyo firfircoonida Morata ayaa iyaduna noqotay mid soo jiidasho leh.
Haddaba, afti uu wargeyska Marca ee ka soo baxa SPAIN ka qaaday dadka, taas oo aan wali dhamaanin, ayaa waxay taageereyaashu 81% isku raaceen in uu wanaagsan yahay Morata oo ay tahay in laga dhigo lineupka, halka Benzema uu helay 19% codadka. Taas oo ka dhigan, in taageereyaashu ay door bidayaan in Morata la ciyaarsiiyo, beddel sugena uu ahaado Benzema.
Barcelona v Bayern Munich: Daawo Laba sannadood Ka Hor iyo marxaladda Maanta
06/05/2015 Abdiwahab Ahmed
Muxuu Van Gaal Ku Calaacalay Guul-Darradii Kooxda Kadib
13/12/2015 Abdiwahab Ahmed
Liverpool Oo La Wareegtay Difaaca Hull City ee Robertson
14/05/2017 Abdiwahab Ahmed